Izindaba - Ukwengeza okujwayelekile - ukuthambekela kwemininingwane yamabhulukwe e-yoga
Ukwengeza okujwayelekile-ukuthambekela kwemininingwane yamabhulukwe e-yoga
Njengento ebaluleke kakhulu ku-yoga nokuqina komzimba, amabhulukwe abumba umzimba aya ngokuya ebaluleke kakhulu. Idizayini eyingxenye ibaluleke kakhulu. Ngesisekelo sokuqinisekisa imisebenzi yezemidlalo, ukunakwa okuningi kukhokhelwa ukubukeka nokuqonda kwemfashini. Idizayini enobuhlakani engenza izitayela zokuqina ezijwayelekile zivuselele. . Lo mbiko uzosebenzisa umhlobiso wezinzwane okhalweni, ukwakheka kokuhlanganisa okuhlanganisiwe, imininingwane yonyawo, ukuguqulwa komlomo wonyawo, ukwakheka okwengeziwe komhlobiso, kanye ne-sexy hollowing njenge-eksisi enkulu yokwenza ngcono ubungcweti nezinto zokwakha ezisetshenzisiwe lapho, futhi zilethe ugqozi kubaqambi ukwenza imikhiqizo emisha.
Idizayini yemidwebo okhalweni emise okweqanda ingaguqula kangcono ijika lekhalo futhi ikhombise okhalweni lwabesifazane; ukwakheka okhalweni kwebhulukwe le-yoga lasentwasahlobo nasehlobo le-2022 kunezinguquko eziningi, futhi iphethini lamachashaza ombala ohlukile kanye nombala wokugqama omile okwehlukanisiwe kuhlanganisiwe ngaphakathi kweYoga kuyimfashini ngenkathi kungezwa ukuthinta kokunyakaza; okwesibili, okhalweni lwesiphambano kungakhishwa ngaphandle, kuveze ukuthinta okhalweni lohlangothi lwabesifazane, okuthandekayo nemfashini.
Idizayini eningiliziwe yamabhulukwe e-step-on yoga inikeza umsebenzi wokuxhasa unyawo lapho seluleke kakhulu, ukuvimbela unyawo ekushibilikeni phezulu nasekugwemeni amahloni; imininingwane yokunyathela unyawo entsha yesizini entsha imfashini futhi yehlukile, futhi ukugoba okuhlukile kokuthungwa namaphethini kuhlanganisiwe Ukwengeza okuvelele kumazansi wonke, kunconywa ukuthi intwasahlobo nehlobo lika-2022 likwazi ukwethula amabhulukwe ezinyathelo ezinyaweni ngezinkinobho zokuhlobisa ekuvulekeni konyawo ukuze kulungiswe, futhi abathengi bangazilungisa imininingwane yezinyathelo zezinyawo ngokwabo. Ngasikhathi sinye, ingafaniswa nezinhlobonhlobo zamabhokisi ezipho ezinyathelo zezinyawo. Abathengi bangakhetha ngokuthanda kwabo, okuthuthukisa ubumnandi babathengi futhi bangahlangabezana kangcono nezidingo zabo. Ngokungeziwe ezinyathelweni zesitayela se-webbing, ukwakheka kweqakala okwenziwe kuqala okwenziwe ngendlela efanelekile kungabonisa kangcono ama-ankle ama-sexy wabesifazane;
Idizayini yokuvulwa kwezinyawo iyindlela ejwayelekile yokuklama esetshenziswa abaklami. Ungayifeza kanjani intsha nemfashini yilokho okufanele sikucabangele; ekwakhiweni kokuvulwa kwezinyawo kwenkathi entsha, ungazama izindlela zokwelashwa eziningi ezi-hollowing, bese uhlanganisa isiqeshana esipholile esicwebezelayo onqenqemeni olungenalutho. Okwesibili Ukuthungwa kwamabhendi ama-base ayisisekelo kuthuthukisa umuzwa wemfashini webhulukwe lilonke. Ukuthungwa kwezindwangu zikasilika ezisobala ezinokuvuleka okungalingani kufanelekile ukunakwa entwasahlobo nasehlobo lika-2022.
Ukhalo lohlangothi lwenziwe ngamasaka amancane aguquguqukayo futhi atholakala kalula. Umhlobiso uphefumulelwe izingubo zangaphandle, ezilungele ukulayisha izinto. Ingasetshenziswa futhi njengomhlobiso emabhulukweni e-yoga. Kungasiza futhi ukuthi abantu abazivocavoca umzimba baphume bayolulama futhi balayishe izinto ezincane ezinjengamakhadi wokungena nokhiye, okuthuthukisa ukusebenza lula; Ibhande eliguquguqukayo lingasikwa okhalweni ohlangothini, ukuze abathengi bakwazi ukuzivumelanisa nokunwebeka okhalweni ngokwabo, futhi umqondo wemfashini uphindwe kabili.
Le ndlela yokubhoboza umgodi izoqhubeka nokusetshenziswa entwasahlobo nasehlobo lonyaka ka-2022. Indawo ekhonjiwe izokhula ngenkathi entsha. Ngasikhathi sinye, ubukhulu be-hollowing bunomkhuba omkhulu kunangaphambili, futhi kukhombisa umsebenzi wokuqala wokuthungwa, okhombisa ubuhle. Futhi sexy.